TikTok Maka Azụmaahịa: Ndị Rịpụtara Ndị Dị Mkpa Na Ntanetị Video A Short-Form | Martech Zone
TikTok Maka Azụmaahịa: Ghọta Ndị Na-eri Ihe Dị Mkpa na Netiwu Vidiyo a Dị mkpụmkpụ
Wenezdee, Machị 24, 2021 Wenezdee, Machị 24, 2021 Douglas Karr
TikTok bụ ụzọ na-eduga maka vidiyo vidiyo dị mkpụmkpụ, na-enye ọdịnaya dị egwu, na-enweghị atụ, na ezigbo. Enweghi obi abụọ banyere uto ya:
TikTok nwere ndị ọrụ dị nde 689 kwa ọnwa n'ụwa niile.
Ebudatara ngwa TikTok karịa oge 2 ijeri na Storelọ Ahịa na Google Play.
TikTok họọrọ dị ka ngwa kachasị ebudatara na Apple's iOS App Store maka Q1 2019, yana ihe karịrị nde 33.
Pasent 62 nke ndị ọrụ TikTok na US dị n'agbata 10 na 29 afọ.
Ebudatara TikTok ugboro nde 611 na India, nke ruru ihe ruru pacenti iri atọ na nbudata ngwà niile nke ngwa a.
Abịa na oge a na-etinye kwa ụbọchị na TikTok, ndị ọrụ na-etinye nkezi nke nkeji 52 kwa ụbọchị na ngwa ahụ.
TikTok dị na mba 155, yana asụsụ 75.
Pasent 90 nke ndị ọrụ TikTok na-enweta ngwa ahụ kwa ụbọchị.
N'ihe na-erughị ọnwa 18, ọnụọgụ ndị okenye TikTok US toro ugboro 5.5.
E nwere nkezi nke ihe karịrị 1 nde vidiyo a na-elele kwa ụbọchị n'ime otu afọ.
Isi Iyi: Oberlo - 10 TikTok Statistics nke Need Kwesịrị Knowmara na 2021
Dịka otu n'ime ngwa ndị ama ama n'ụwa niile, TikTok na-enye ụlọ ọrụ ohere iru ọtụtụ obodo ndị ọrụ na-ebute ntụrụndụ na izi ezi ụzọ.
TikTok Maka Azụmaahịa bụ otu n'ime netwọkụ naanị na-eto eto na iOS (+ 52% ahịa ahịa). Netwọk mmekọrịta ahụ gbagoro na ntụpọ 1 na iOS ruo # 7 na ntụpọ 1 na gam akporo ọdịda na # 8. N'elu ọkwa nke obe, ọ ruru ogo 5 kacha elu na Entertainment, Social, Web, Health & Fitness, Finance, Photography, and Utility Group.
Ndepụta arụmọrụ arụmọrụ AppsFlyer
Onye njikwa Mgbasa Ozi TikTok
Site na njikwa njikwa Mgbasa Ozi TikTok, ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa nwere ohere ịgbazinye ma tinye ebe Mgbasa ozi In-App (IAA) ma ọ bụ bido ngwa ngwa ngwa ekwentị ha na ndị na-ege ntị na TikTok na ezinụlọ nke ngwa ha. Site na ebumnuche, okike mgbasa, akụkọ nghọta, na ngwaọrụ njikwa mgbasa - Onye njikwa Mgbasa Ozi TikTok na-enye gị usoro ikpo okwu dị ike, ma dị mfe iji nyere gị aka iru ndị na-ahụ ngwaahịa na ọrụ gị n'anya.
Ntinye TikTok na Formdị
You mgbasa ozi nwere ike ịpụta na otu n'ime ọnọdụ ndị a dabere na ngwa ahụ:
Ntinye TikTok: Mgbasa ozi ga-apụta dị ka na-ndepụta na mgbasa ozi
Ntinye ohuru ohuru: Mgbasa ozi ga-egosi na ndị na-esonụ ọnọdụ:
BuzzVideo: na-ndepụta, peeji nkọwa, post-video
TopBuzz: na-ndepụta, peeji nkọwa, post-video
Akwụkwọ akụkọ: na-fiidi
nwa ọhụrụ: na-fiidi, peeji nkọwa
Pangle pangle: Mgbasa ozi ga-egosi na dị ka playable mgbasa, Interstitial video ads, ma ọ bụ ụgwọ ọrụ vidiyo na-akwụ ụgwọ.
TikTok Mgbasa ozi Mgbasa ozi na-akwado ha abụọ image mgbasa ozi na video mgbasa ozi ụdị:
Foto Mgbasa ozi - enwere ike ịkọwa ya ma PNG ma ọ bụ JPG anabatara ya na mkpebi amamịghe nke opekata mpe 1200px ogologo site na 628px n'obosara (enwere ike ịnabata mgbasa ozi kwụ ọtọ).
Mgbasa ozi vidiyo - dabere na ebe ịchọrọ ịdebe ha, oke akụkụ 9: 16, 1: 1, ma ọ bụ 16: 9 nwere ike iji vidiyo 5 sekọnd ruo 60 sekọnd ogologo na .mp4, .mov, .mpeg, .3gp , ma ọ bụ .avi usoro.
TikTok na-enye Ndebiri vidiyo, a ngwá ọrụ na-eme ka eke video mgbasa ozi ngwa ngwa na mfe. Nwere ike ịmepụta vidiyo vidiyo site na ịhọrọ ndebiri na bulite foto gị, ederede, na logos.
TikTok: Mmemme Weebụ Mmemme
Tụgharị ndị ọrụ TikTok na ndị ọrụ webụsaịtị nwere ike ịga ma ọ bụ zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na saịtị gị dị mfe na pixel nsuso TikTok.
TikTok: Mmemme In-App
Mgbe onye ọrụ pịa / lelee mgbasa ozi ma mee ihe ndị ọzọ dị ka nbudata, rụọ ọrụ, ma ọ bụ ịme ihe n'ime ngwa n'ime windo ntụgharị a setịpụrụ, ndị otu Mmakọ Mobile (MMP) na-eziga data a na TikTok dị ka ntụgharị. A na-egosiputa data ntụgharị, na-eji njirimara ikpeazụ, na TikTok Mgbasa ozi Mgbasa Ozi na ọ bụ ntọala maka njikarịcha n'ọdịnihu na mkpọsa ahụ.
TikTok maka Azụmaahịa Jiri: Ikpeazụ & Gwa
Dị ka ụlọ ahịa ọla edo nọọrọ onwe ha, Slate & Tell na-achọ iwulite mmata na nchebara echiche n'oge oge ere kacha elu. Site na itinye TikTok Maka azụmaahịa dị mfe iji Smart Video Creative ngwá ọrụ na iji kwado mkpọsa maka ihe omume, ha mepụtara ihe ọchị na ịmekọrịta ihe ruru ndị ọrụ 4M TikTok wee rụpụta 1,000 otu nnọkọ tinye na ụgbọ ibu ntụgharị, na-enyere ha aka imezu ebumnuche ha nke 2X nloghachi-na-ad-etinye n'ime naanị ọnwa isii.
Bido na TikTok Taa!
Tags: b2cb2c mgbasa ozimgbasa ozi ndị ahịayaaana-ngwa mgbasa ozintinye ngwamgbasa ozi mgbasa oziTikToktiktok ad ntinyenjikwa mgbasa ozi tiktoktiktok maka azụmaahịastats tiketitiktok mkpokọta mmemmemgbasa ozi vidiyovideo mgbasa ozi
UpLead: Wulite Ezigbo B2B Prospect List Iji Mgbasa Ozi Ike na Mechie Ahịa